I-Apple iibhlokhi i-iCloud yabucala yokuDlulisa i-iOS 15 eRashiya | IPhone iindaba
Ingelosi Gonzalez | 17/09/2021 20:00 | iOS 15, Izaziso
IOS 15 kunye ne-iPadOS 15 zizisa enye yezona zinto zibalulekileyo kwi-Apple: ICloud yabucala edluliselwe okanye iCloud yabucala edluliselwe. Sisixhobo esisebenzayo ivumela umsebenzisi ukuba azifihle i-IP ngalo lonke ixesha Ukuthintela iinkonzo ekufumaneni iprofayili yendawo. U-Apple ubhengeze kwi-beta 7 ye-iOS kunye ne-iPadOS 15 ukuba izakushiya umsebenzi ngohlobo lwe-beta yoluntu kwaye iya kukhutshwa ngokusemthethweni kodwa ikhubazeke ngokungagqibekanga. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo u-Apple ubhengeze amanye amazwe ukuba awuzukubona lo msebenzi ngenxa yeengxaki kwimithetho yabo. Namhlanje siyayazi loo nto Ukufikelela kububanzi baseRussia kwinqaku kuvaliwe kwaye kuya kudityaniswa kuludwe lwamazwe apho inqaku lingazukubakho.
ICloud Private Relay ayiyi kubona ukukhanya eRashiya
NgoJuni, uTim Cook uqinisekisile ukuba i-ICloud yabucala idluliselwe ngekhe ifike eBelarus, eColombia, e-Egypt, e-Kazakhstan, e-Saudi Arabia, eMzantsi Afrika, e-Turkmenistan, e-Uganda nase-Philippines. Kudliwanondlebe, waqinisekisa ukuba akukho sithintelo ngaphandle kwezizathu zolawulo kwilizwe ngalinye. Ke ngoko, iinguqulelo zokugqibela ze-iOS 15 kunye ne-iPadOS 15 ayinakuwazisa lo msebenzi kwaye kwimeko yokufikelela kweli lizwe ngekhe ifumaneke ukuba isetyenziswe.
ICloud Private Relay ayisayixhaswa eRashiya pic.twitter.com/df4z1q0gLQ
- Абдулла Хасан Иванов (@abdulla_hasan) Septemba 16, 2021
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo ii-tweets zaqala ukubonakala kwaye Izaziso Abasebenzisi abanee-iOS kunye ne-iPadOS 15 zebas abakwazanga ukukhangela kwi-ICloud yangoku ngokuBucala eRashiya. Ngapha koko, umyalezo wawuza kuvela othi: 'ICloud Private Relay ayifumaneki kulo mmandla'. Ke ngoko, iApple inokuthi ivale inqaku eRashiya. Ke ngoko, iya kongezwa kumazwe apho isixhobo singazukufumaneka kufakelo olusemthethweni lweenkqubo zokusebenza. Iyakwandiswa nakwiMacOS Monterey, kunokwenzeka.
Ukudluliswa kwangasese kwe-ICloud kusebenzisa iiserver ezimbini ezahlukeneyo ukuya fihla i-IP yomsebenzisi kunye nendawo. Kwiseva yokuqala i-IP yoqobo iyasuswa kwaye kowesibini umqondiso utsaliwe kwiseva yendawo ekuyiwa kuyo. I-IP ethunyelweyo yidilesi engeyiyo ethi ifumane i-IP yoqobo ukuze ifumane umxholo owenzelwe wena. Nangona idilesi ye-IP yomsebenzisi ifihliwe kwaye ithintela iiseva ekudaleni iinkangeleko zokukhangela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » I-Apple ibhloka inqaku le-iCloud le-ICloud labucala eRashiya